JIANGXI JINGYE Igwe na nkà na ụzụ CO., LTD. bụ a elu-tech onwe enterprise na-eche banyere oru nnyocha na mmepe, injinịa imewe, akụrụngwa rụpụta na echichi. N'ihe banyere echiche ekike nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nchebe gburugburu ebe obibi na nchekwa nchekwa ike, anyị ebutela ụzọ ịghọ ezigbo onye na-azụ nri, ihe ọverageụverageụ, ihe ndị dị ndụ, kemịkalụ, akụrụngwa ọgwụ na ume ọhụrụ, ngwa ọrụ nkwukọrịta eriri anya.
Companylọ ọrụ anyị na-agbakọta ọtụtụ talent ụlọ ụlọ ndị dị mma na igwe, injinia, teknụzụ, ubi njikwa na-akpaghị aka. Na anyị nọgidere mma anyị isi asọmpi site onwe ha nnyocha na mmepe technology ọhụrụ.
Kemgbe 2010, Jingye na-enye akụrụngwa dị mma, ọzụzụ na ndụmọdụ nye ọrụ nri na ụlọ ọrụ mmepụta ihe oriri. Nkà ihe ọmụma anyị na-abụkarị inye akụrụngwa yana ọrụ mgbakwunye bara uru.
Ebe ọ bụ na usoro doro anya bụ mgbọrọgwụ maka njikwa ihe ịga nke ọma, ndị ọrụ ọ bụla maara ọrụ dịịrị ha na ndị ahịa anyị.
Ntụziaka a maka ihe ịga nke ọma emeela ka anyị nwee aha ọma na ụlọ ọrụ nri na ihe ọ beụverageụ na afọ 11 gara aga. Aha Jingye na-anọchi anya teknụzụ igwe na ezigbo ọrụ.
Jingye gbalịsiri ike inye ndị ahịa akụrụngwa kachasị mma, anyị maara na na-enweghị ezigbo nkwado ọrụaka, ọbụlagodi obere nsogbu nwere ike ime ka usoro mmepụta akpaka niile kwụsị ịgba ọsọ. Ya mere, anyị nwere ike ịzaghachi ngwa ngwa ma dozie nsogbu mgbe anyị na-enye ndị ahịa tupu ịre ahịa, ọrụ ahịa na ahịa ahịa. Nke a bụkwa ihe mere Jingye ji nwee ike ijide oke ahịa ahịa na China ma nọgide na-eto.
Iji bụrụ onye ndu kachasị na ụlọ ọrụ ihe oriri na ihe ọverageụverageụ na ihe ọverageụ globalụ zuru ụwa ọnụ bụ ihe mgbaru ọsọ nke ndị Jingye, anyị enwetala ndị injinia injinịa, ndị injinia na ndị injinia eletriki eletriki, ọ bụ nzube anyị na ọrụ anyị iji nye ndị ahịa anyị kacha mma ngwaahịa, ọrụ na gburugburu ebe ọrụ. Anyị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, anyị makwaara na uru anyị bara bụ inyere ndị ahịa anyị aka ịmepụta uru. Iji mezuo mkpa nke ndị ahịa dị iche iche, anyị na-aga n'ihu na-agbanwe agbanwe, iji zụlite ma mepụta azịza ahaziri iche maka ndị ahịa.